Wakiilka qaramada midoobey cadowga dalka ayuu kala shirayaa xalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wakiilka qaramada midoobey cadowga dalka ayuu kala shirayaa xalka
Wakiilka qaramada midoobey u jooga Somaliya oo hogaamiya kooxda sheegata beesha caalamka ayaa sheegay inuu xalay taleefano u direy wasiirada arimaha dibeda ee gobolka kala shirey xalka dalka iyo waxa uu ku tilmaamay doorashada.
”Waxaan wada ognahay in kooxda sheegata beesha caalamka inay ka dhigteen doorashadii dalka kubad ay sidey doonaan ugu cayaaraan ayuu yiri Cali Calasow. Haddana wuxuu bilaabay inuu cadowgii dalka uu yiraa xalka keena ayuu raaciyay.
Kooxda sheegata beesha caalamka ayaa hortaagan in doorasho dhacdo waxayna muddo ku taamayeen in madaxda qaranka la gaarsiiyo 8 Feebarwari kadibna yiraahaan xilligii ayaa ka dhacay ayagoo og in dalku leeyahay nidaam sharci oo ku meelgaara.
”Waxay ogyihiin in Somalida oo ay ka soo dhex baxayaan xildhibaanada dooranaya madaxweynaha ay u wada janjeedhaan dib u doorashada madaxweynaha hadda xilka haya, waana halka ay dagaalka ka wadaan ayuu yiri Xuseen Warsame.